यस्तो गाउँ : जहाँ केटा नपाएर युवतीहरु अविवाहित नै बस्छन् ! – साँचो खबर
यस्तो गाउँ : जहाँ केटा नपाएर युवतीहरु अविवाहित नै बस्छन् !
काठमाडौं – समय समयमा विश्वका कुना कन्दराबाट बिभिन्न खाले अनौठा, रोचक र अपत्यारिला खबरहरु आईरहन्छन् । एउटा त्यस्तै खबर फेरि आएको छ । तपाईंलाई पत्यार नलाग्न सक्छ – यो संसारमा एउटा यस्तो गाउँ छ, जहाँका युवतीहरुले केटा नपाउँदा विवाह नै गरेका छैनन् । उनीहरुले केटा नपाएकै कारण अविवाहित जीवन बिताईरहेका छन् ।
जीवनसाथी पाउने आशमै उनीहरुको उमेरले बुढेसकालमा टेक्छ । यो कहानी हो, ब्राजिलको एक गाउँको । यो गाउँमा ६ सय जति महिलाहरुको संख्या छ, जसमा तीन सय भन्दा बढी युवतीहरु अविवाहित छन् । उनीहरुले केटा पाएका छैनन् । जीवनसाथीको खोजीमा रहेका ती युवतीहरुको उमेर १८ देखि ३० वर्षसम्मको छ।
यो गाउँमा विवाह नभएको केटा भेटाउनु भनेको परालमा हराएको सियो खोज्नु जस्तै हो । यस्तो अवस्था भएपछि त्यहाँका कतिपय युवतीहरु विवाह भईसकेका पुरुषहरुसँग विवाह गर्ने र सौता बनेर बस्ने गरेका समाचारमा जनाईएको छ ।
यहाँका युवतीहरु केटा पाएमा विवाह गर्न आँतुर छन्, तर गाउँभित्र मात्रै । यहाँको चलनले बिहे गरेपछि सो गाउँ भन्दा बाहिर जान दिदैन । गाउँ भन्दा बाहिरको कुनै पनि केटासँग यहाँका युवतीले बिहे गर्न चाहँदैनन् । तर बिहे गरिहालेमा पनि केटाले आफ्नो गाउँ छाडेर सोही गाउँमा बस्नु पर्ने हुन्छ ।
पुरुषलाई गाउँमा बस्न दिईदैन
यहाँको यो गाउँमा विवाहित महिलाहरुले समेत आफ्ना लोग्नेलाई गाउँमा बस्न दिएका छैनन् । उनीहरुलाई हप्ताका ५ दिन कामका लागि गाउँ बाहिर पठाइन्छ भने हप्ताको अन्त्यमा मात्रै मात्र उनीहरु घर फर्किन पाउँदछन् । १८ वर्ष उमेर पुगेका केटाहरु पनि गाउँमा बस्न पाउँदैनन् । यो गाउँ सन् १८५१ मा मातृसत्तात्मक गाउँको रुपमा स्थापना भएको हो । एजेन्सीको सहयोगमा
Previous: न सर्टिफिकेट, न विद्यालय : २६ वर्षदेखि अध्यापन मै सक्रिय जीवछ मास्टर !
Next: उत्तर कोरियाले दुईजना अधिकारीलाई मृत्युदण्ड दियो, राजधानी बन्द गरायो